Sidee loo Sameeyaa Xisaab Gmail ah? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 516
Gmail waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan, fududahay in la dejiyo lana isticmaalo. Gmail dhexdeeda waxa ugu fiican oo dhan si loo diiwaangeliyo koontadaada cusub wax lacag ah oo dheeri ah ma leh.
Abuur akoon Gmail ah Waa mid faa'iido leh oo faa'iido u leh isticmaalkaaga, sababtoo ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad noqotid milkiilaha meheraddaada, saaxiibkaaga ugu fiican, u dir oo u soo dir e-mayl kuwa aad rabto, kula xiriir adduunka oo dhan adoo adeegsanaya sheeko, wicitaanada fiidiyowga illaa 100 qof la subtitles snapshots iyo shaashad la wadaago, abaabulo dhammaan macluumaadka aad rabto in aad mailkooda iyo kuwa kale.
Gmail waa madal fudud waana fududahay in la rakibo qalab kasta tan iyo markii laga heli karo dhammaan aaladaha iOS iyo Android iyo kombiyuutarrada.
In la sameeyo xisaab Gmail ah waxaad u baahan tahay koonto cusub oo Google ah iyo hal xisaab oo Gmail ah oo koonto kasta oo Google ah.
Sidee loo abuuraa Xisaab cusub oo Google ah iyo koontadaada cusub ee Gmail?
Ka soo gal google.com
Wuxuu ka bilaabmayaa Shaashadda raadinta Google.
Dhagsii badhanka gal. "
Guji xiriirinta "Abuur koontadaada Google."
Goobta magacaaga iyo Magaca isticmaalaha.
Waxay ka bilaabataa daaqada "Abuur koontadaada Google"
en el garoonka "Magaca" ku qor magaca isticmaalaha koontadaada cusub ee Gmail.
Markaad qoreyso magacaaga Waxaad isticmaali kartaa xarfaha aan caasimada ahayn, lambarrada iyo xilliyada.
Gali lambarka sirta ah waana inaad doorataa mid aad abuurto
Qor oo xaqiiji Furaha
Gali erey sir ah koontadaada cusub ee Gmail. (Waa inuu ahaado ugu yaraan 8 xaraf.)
Waxaad horey u haysatay lambarka sirta ah, markale qor oo markale xaqiiji. (Labaduba waa inay sax ahaadaan).
Meel dhig taariikhda dhalashada.
Gali macluumaadka goobta iyo soo kabashada.
Gali kanaga Cinwaanka emailka.
ka xusho goobtaada meeniska hoos-u-dhaca goobta Goobta.
Aqbal Shuruudaha Google.
Waxaad horey u laheyd xisaab cusub "Google" iyo koonto cusub "Gmail".
Sida loo furo xisaabtaada Gmail ka dib marka la sameeyo.
Tag shaashadda Google ugu weyn.
Riix dhagsii xiriirka Gmail.
Fur fadhigaaga ka socota Gmail.
Qor emaylkaaga iyo eraygaaga sirta ah.
Sanduuqa sanduuqa waxaad ku arki doontaa farriin ka socota Ku soo dhowow Google. "
Waxaad arki doontaa astaamo sida aad ugu dari karto sawir muuqaal ah, mowduuc, xiriir soo dejin iyo kuwa kale.
Kadib markaad kuqabsatid howlahaaga Gmail, guji badhanka "Fadhiga Xidh."
Ka bax koontadaada ka socota Gmail.
Waxaad baratay sida loo abuuro koontadaada Gmail, hadda waad maamuli kartaa oo adeegsan kartaa aaladaha barnaamijkan ku siiya.
1 Sidee loo abuuraa Xisaab cusub oo Google ah iyo koontadaada cusub ee Gmail?
2 Sida loo furo xisaabtaada Gmail ka dib marka la sameeyo.